Tsy milamina ny tany Efa misy mpanendaka koa eny amin’ny Hopitaly
«Tahaka ireny mpiandry marary ireny ireo olon-dratsy ao anaty hopitaly kanefa manendaka ety ivelany miaraka amin’ny antsy lavalela.
Hitanay nampiditra antsy maranitra ireo roalahy raha iny avy nisalobona lamba iny ka tsy azony izahay fa andro hafa no nahazoany ny havanay”, hoy i Gabriel Rinah, mpiandry marary iray. Araka ny fanazavany, vao tamin’ny 7ora hariva mahery fodian’ny mpamangy, nahatsikaritra olona nitondra zava-maranitra tao anatin’ny hopitaly Befelatanana izy sy ny fianakaviany, ary niandry teny amin’ny maizimaizina ivelany ka nihataka fa nenjehin’izy ireo sady norahonany no nampisehoany ilay antsy lavalela. Andro hafa, voatery nividy fanafody tamin’ny 1 ora maraina ny zokiny sy ny zaodahiny ka voaendaka vao afaka ny vavahady ka very ny vola sy ny zava-tsarobidy noho ny hery tsy mitovy. Ny dokotera nefa mampaniraka haingana fa fanafody vonjy aina. Taty aoriana, voatery maka fiarakaretsaka isaky ny mandeha kanefa ny vidim-panafody efa lafo, manampy trotraka ny fidangan’ny vidim-piainana, hoy hatrany i Gabriel Rinah. Anjakan’ny mpanao sinto-mahery mitondra sabatra ireo mpividy fanafody amin’ny alina, manodidina ny hopitaly eto an-drenivohitra fa tsy eo Befelatanana ihany. Efa maro no lasibatra tahaka azy ireo ny teny amin’ny CENHSOA Soavinandriana miakatra sy midina miala eo am-bavahady sy ny eo Anosy afaka ny HJRA. Miandrandra ireo tompon’andraikitra ara-miaramila sy sivily, indrindra ny eo anivon’ny fahasalamana sy ny fokontany ireo olom-pirenena noho izao toe-javatra mamohehitra izao.